Isicwangciso sakho seNtengiso se-B2B Khange sihlengahlengiswe kuhambo loMthengi | Martech Zone
Kulungile… oku kuzakuhlaba kancinci, ngakumbi kubahlobo bam kwintengiso:
Amaqela okuthengisa asokola ukuzibandakanya nabathengi kwaye ahlangane neethagethi zawo ezikhokelela kwilahleko kwimveliso yentengiso. Umthengi uya esiba nzima ukufikelela, ekhokelela kwintengiso yemveliso yokuphoswa kwelitye. Xa abathengisi abathethayo ekugqibeleni bethetha neethagethi zabo, bajongwa ngumthengi njengolungisiweyo olungalunganga, ikakhulu kuba umthengi wanamhlanje unolwazi oluninzi olungapheliyo kunye nembono ngaphambi kokuzibandakanya nentengiso. Abathengi abangaphantsi kobukrelekrele ababizeli abathengisi ukuba baphinde babuyele kwinkqubo, oko kuthetha ukuba imali kunye nomzamo otyalwe ekufikeleleni kwabo bathengi uchithiwe.
Isikhalo sam sokulwa iminyaka elishumi ngoku sinye, ukuba iqela lakho lokuthengisa alidibani namathemba apho akhoyo, kwaye nezinto zakho zentengiso azikho. Rhoqo ngonyaka kubonakala ngathi Umzuzu weNyaniso -Ingongoma apho umboleki okanye ishishini lenza khona isigqibo sokuthenga -Iyaqhubeka nokuqhubela phambili ngakumbi kude nendawo yokudibana neqela lakho lokuthengisa.
Esi sisitshixo sokuthengisa umxholo kunye nezicwangciso zentengiso zosasazo loluntu… ukuba nezinto zophando kunye nabathengisi bakho kufutshane nelo xesha kumjikelo wesigqibo. Ukongeza nje ii-SPIFs (iNgxowa-mali yokuSebenza yokuThengisa), izikhuthazi, iinjongo, okanye itekhnoloji ayonelanga.
Yiyo loo nto sibongoza abathengi bethu ukuba baqhubeke ukuphuhlisa umxholo othuthwayo njenge-infographics, amaphepha amhlophe, izifundo zetyala, ii-webinars, imiboniso kunye nokufumana eyabo imibutho yokuthengisa ibandakanyeka ekuhlaleni. Kungenxa yoko le nto sisebenzisa izixhobo ezingcono, njengobukrelekrele be-IP, ukuchonga amashishini atyelele indawo yakho ukuze ukwazi ukufikelela kwaye uqhagamshele kunye nawo phambi kokuba isigqibo sokuthenga senziwa.
IBridgeBridge iphuhlise le infographic ukunceda ukujonga lo mbandela. Izisombululo ze-MarketBridge zinceda ukuThengisa kunye nokuThengisa ukwandisa ivolumu yombhobho, isantya, amaxabiso asondeleyo, kunye nokunyaniseka kwabathengi.
tags: Uhambo lwabathengi b2buhambo lwabathengiamaxabiso asondeleyoukunyaniseka kwabathengiyandisa ivolumu yombhobhoimarikeingenisoingenisoulungelelwaniso lokuthengisauhlalutyo oluhlakaniphileispifsVelocity
Uqikelelo lweNtengiso eSebenzayo yesiCwangciso sowama-2015